ကမ္ဘောဇတိုင်းဌာနီ….မောတို့ဌာနေသို့ တစ်ခေါက်?? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ကမ္ဘောဇတိုင်းဌာနီ….မောတို့ဌာနေသို့ တစ်ခေါက်??
Posted by Shar Thet Man on Mar 29, 2017 in Local Guides, Travel |4comments
????ဝေသီခေါင်အောင်..မြင့်မားတဲ့မြေ…တောင်ပေါ်လမ်းက..ကားလေးနဲ့ လေ…..??ဆိုတဲ့အတိုင်းမြင့်မားတဲ့တောင်များကိုကွေ့ ပတ်သွားရတဲ့တောင်ကြီး၊
ရုံးကအမတွေညီမတွေနဲ့ ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီးတော့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ကားခတွေကတော့ အစားစားပဲ။
မနက်(၈)နာရီ၊ညနေ (၆)နာရီ ထွက်တာက Lumbini (VIP – 18000 kyats)?
မနက်(၈)နာရီ၊ညနေ(၅)နာရီ၊ည(၆)နာရီထွက်တာက Elite ( Executive – 14300 kyats/Business – 22300 kyats)? နဲ့ ပုဂံမင်းသား (VIP – 18500 kyats)?
မနက်(၈)နာရီ၊နေ့ လည်(၃)နာရီနဲ့ ည(၆)နာရီထွက်တာက ဒို့ ညီနောင် (ရိုးရိုး – 11300 kyats)?
ညနေ(၄)နာရီထွက်တာက ရွှေမန်းသူ (ရိုးရိုး – 10700 kyats)?
ညနေ(၆)နာရီထွက်တာက မန္တလာမင်း (ရိုးရိုး – 12500 kyats) ?၊ မန်းသစ္စာ (ရိုးရိုး – 11300 kyats)၊ JJ express (VIP – 19800 kyats)၊ တို့ ရှိပါတယ်။..ကျန်တဲ့လိုင်းကားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်.သိတဲ့သူများမန့် သွားကြပါ ဦးနော်..❗️❗️
ရန်ကုန်ကနေညနေထွက်တဲ့ကားစီးလာပြီးတော့အောင်ပန်းကိုမနက် (၄)နာရီဝန်းကျင်လောက်ရောက်သွားပါတယ်။အဲ့မှာမနက်စာစားပေါ့။ပြီး တာနဲ့ တောင်ကြီးကိုဆက်တက်ကြတယ်။ မွန်လေးတို့ ကတော့ညောင်ရွှေမှာ ဆင်းကျန်ခဲ့ကြပြီးဘွတ်ကင်လုပ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကိုတုတ်တုတ်နဲ့ ဆက်သွားခဲ့ကြ ပါတယ်။
မွန်လေးတို့ ကတော့လှေဆိပ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့၊လှေဆိပ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားရင်(၅)မိနစ်ပဲရှိတဲ့ Gold Star Hotelမှာတည်းခဲ့ကြတယ်။ဈေးကလည်း၂ယောက်
ခန်းတစ်ခန်းမှ(၂၈၀၀၀)ထဲရယ် (အေဂျင့်နဲ့ ချိတ်တဲ့ဈေးပါ)ဟိုတယ်မှာအထုပ်တွေချပြီးတာနဲ့ အင်းထဲသွားဖို့ လှေဆိပ်ကိုဆင်းကြပါတယ်။
ဘုရား(၄)ဆူဒေသစာရီကြွချီလာမယ့်ရွာကိုလှေနဲ့ နောက်ကလိုက်ကြရတာပေါ့။တစ်ရက်နဲ့ တစ်ရက်ဒေသစာရီကြွတဲ့ရွာချင်းမတူပါဘူး။ အင်းလေး၊ဖေါင်တော်ဦးဘုရားပွဲကို နှစ်စဉ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁)ရက်နေ့ကနေ သီတင်းကျွတ်လဆုတ် (၃)ရက်နေ့အထိ ဖောင်တော်ဦးဘုရားများကိုမင်္ဂလာဖောင်တော်ပေါ်တင်ပြီးတော့ ညောင်ရွှေမြို့နဲ့အင်းလေးကန်အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ ရွာပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက်ဆီကို လှည့်လည်အပူဇော်ခံပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ထို ပွဲကို ကျောင်းတော်
တောင်ဆိုတော့ကိုယ်အားတဲ့ရက်နဲ့ ချိန်ပြီးအင်းလေးဖောင်တော်ဦးပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲလို့ ရပါတယ်လို့။ဟိုးတုန်းကတော့ ရုပ်ပွားတော် ငါးဆူစလုံး ပင့်ဆောင်ပူဇော်ခံ ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၆၈ခုနှစ်မှာ ဒေသစာရီလှည့်လည်တော်မူချိန်မှာ အင်းရေပြင်တွင် မိုးကြီး၊ လေကြီး မြင်းပြင်းထန်ထန် ရွာခဲ့လို့ ဖောင်တော်ကြီးဟာ ရုပ်ပွားတော် ၅ ဆူနှင့်အတူ နစ် မြုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်းများစွာရေထဲဆင်းပြီးရုပ်ပွားတော်များကို ရှာပေမဲ့ ၄ ဆူကို သာ ပြန်တွေ့ ပြီး ကျန်တစ်ဆူကို လုံးဝရှာလို့ မတွေ့ ခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဖောင်တော်ဦး ကျောင်း တော် ကို ပြန်ရောက်ပြီး ဂန္ဒကုဋီတိုက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ ရေအောက်မှာ ရှာမတွေ့  ခဲ့တဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကို ဦးခေါင်းမှာ ရေမှော်များတင်ထားတဲ့အတိုင်း မူလပလ္လင်ပေါ်တွင် အံ့သြဖွယ် ဖူးတွေ့ လိုက်ကြရပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်တွင်လည်း အင်းတိမ်ရွာအရောက် တွင် မိုးလေသည်းထန်စွာ တိုက်လို့ထိုရုပ်ပွားတော်ကို ညတွင်းချင်းပင် မူလစံကျောင်းသို့ ပြန်လည်ပင့်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့အချိန်က စပြီး ပွဲတော်ကျင်းပတိုင်း ရုပ်ပွားတော် ၄ ဆူသာ ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူခဲ့ပါတော့တယ်။ရွာတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လည်းဆွဲလှေအစီး လေးဆယ်လောက်နဲ့အင်းသားတွေတပျော်တပါးကြီး၊ တမျှော်တခေါ်ကြီး၊ ကကြခုန်ကြ နဲ့ သူတို့ တွေလည်းပျော်၊ကိုယ်တွေလည်းပျော်ပေါ့။ ကျောင်းတော်တက်ပွဲပြီးတာ နဲ့ လှေပြိုင်ပွဲကျင်းပကြပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာတစ်နေရာထဲရှိတဲ့ ခြေထောက်နဲ့လှော်တဲ့ပြိုင်လှေကြီးတွေပြိုင်ကြတာရင်ခုန်ဖွယ်ရာပါ။ လှေသေးသေးရှည် ရှည်လေးပေါ် လူလေးဆယ်ကျော်တက်ပြီးခြေထောက်အားနဲ့လှော်ကြတာဖြစ်လို့အလွန်မြန်ပါတယ်။ကြည့်ရတဲ့သူတောင်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။???
ညောင်ရွှေချိုင့်ဝှမ်းကြီးရဲ့ အလယ်..အနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်းက အင်းလေး ကန်သာဝယ်…ဆိုတဲ့အတိုင်းအင်းလေးကန်ကြီးကမြန်မာတို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ အမှတ်အသားလည်းဖြစ်ပြီး ညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာ ရှိပါတယ်။ အင်းထဲကိုလည်ဖို့ စက်လှေခကတစ်စီးကို (၂၄၀၀၀)ပါ။အသွားအပြန်ပေါ့။ စီးလုံးမငှါးဘူးဆိုရင်တော့လူများတဲ့အထိစောင့်ရပါတယ်။ ဇင်ယော်လေးတွေကို အစာကျွေးဖို့ပဲခွေလေးတွေနဲ့ ငါးလေးတွေအတွက် ပေါက်ပေါက်လေးတွေ လည်းလှေဆိပ်မှာရောင်းပါတယ်။
“အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားသည် အင်းလေးကန်ရှိ နန်ဟူးရွာ၌ တည်ရှိသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် သာမက၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် အရာလည်းဖြစ်သည်။ သက္ကရာဇ် (၇၂၁)ခုနှစ်တွင်ညောင်ရွှေမြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သော စော်ဘွားကြီး ဆီဆိုင်ဖ လက်ထက်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၆၄၄)ခန့် ကာလ (ယခု)သန်းထောင် ဘုရားနယ်မြေအတွင်း တစ်ခုသောနေရာတွင် တောခြုံပိတ်ပေါင်းတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကွယ်ပျောက်လျက်ရှိ
သော လိုဏ်ဂူ အတွင်းမှ ဘုရားဓာတ်တော်၊ မွေတော်များ ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးသည်ကို သန်းထောင်နယ်သားတို့ ဖူးမြင်တွေ့ရှိကြရသည်။ ထိုအခါ စော်ဘွားကြီး ဆီဆိုင်ဖထံ သွားရောက် သတင်းပေးကြသည်။
ထိုအခါ စော်ဘွားကြီး ဆီဆိုင်ဖသည် အားရ၀မ်းသာဖြင့် ဆွေတော် မျိုးတော် မှူးမတ်တို့နှင့် ပရိတ်သတ်လေးပါးမြောက်များစွာ ခြံရံ၍ သန်းထောင်အရပ်သို့ ထွက်လာကာ မြက်ခြုံပိတ်ပေါင်းတို့ကို ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ပြီး လိုဏ်ဂူကို တူးဖော်ကြည့်ရာ ဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော် (၅)ဆူတို့ကို ဖူးမြင် တွေ့ရှိရပေသည်။ ၄င်းရုပ်ပွားတော် ငါးဆူတို့အနက် နှစ်ဆူမှာ ရဟန္တာပုံတော် ဟုသိရပါသည်။ ၄င်းရုပ်ပွားတော် (၅) ဆူကို ဖောင်တော်ဦး ရုပ်ပွားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။စော်ဘွားကြီးဆီဆိုင်ဖသည် ယင်းရုပ်ပွားတော်မြတ်(၅)ဆူကိုမိမိ၏ နေပြည်တော်ညောင်ရွှေမြို့တော်သို့ ပင့်ဆောင်ပြီးဟော်နန်းဦးစံပြဿသာဒ်ပေါ်တွင် ကိုးကွယ်တော်မူပြီးမှ သီတင်းကျွတ် လဆန်း (၇) ရက်သို့ရောက်သောအခါဟော်နန်းဦးမှ အောက်သို့ ပင့်ယူပြီး လှပ တင့်တယ်စွာ ဆောက်လုပ်ထားသော ပြဿာဒ် မဏ္ဍပ်အတွင်းကောင်းစွာစံထားလျက် ပြည်သူပြည်သားတို့၏ အဖူးအမြော် အပူဇော်ခံပွဲသဘင် ဆင်ယင် ကျင်းပတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟော်နန်းဦးမှ မြို့သို့ ကြွဆင်းတော်မူသည်ကို အစွဲပြု၍ (စစ်ဘုရားလုံးစိုင်း) လူ့ပြည်သို့ကြွဆင်းလာသော မြတ်စွာဘုရားဟု ရှမ်းဘာသာဖြင့် ခေါ်တွင်သောကြောင့် မူလ ဖောင်တော်ဦးဟူသော အမည်မှာ အခိုက်အတန့်အားဖြင့် ကွယ်ပျောက်ခဲ့လေသည်။
သက္ကရာဇ်(၁၂၅၂)မှစ၍ ရုပ်တုတော်ငါးဆူကို နန်းဟူးရွာ၌ ထာဝရ ကျောင်းတော်ကြီးတည်ဆောက်ပြီး ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြမှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။
အခြားအဆိုတစ်မျိုးမှာ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည် တိုင်းခန်းလှည့်လည်တော်မူရင်း ဇမ္ဗုသပြေပင်ရင်းသို့ ရောက်ရှိတော်မူသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဘီလူးမတစ်ဦးသည် သားငယ်ကိုပိုက်၍ မြစ်ကမ်းနားက ကြည့်နေရာ သားငယ်သည် မြစ်အတွင်းသို့ ကျသွားသည်။ အလောင်းစည်သူမင်းကြီး သိတော်မူလျင်ယမထာကြိမ်လုံးဖြင့်
ရေကိုပုတ်ခတ်ရာ ရေစောင့်နတ်က ဘီလူးမ၏သားကို ဆယ်ယူပေးအပ်လိုက်သည်။ ဘီလူးမသည် ဝမ်းသာလွန်း၍ ဟိမဝန္တာတောရှိ အနံ့မွှေးကြိုင်လှသောသရက္ခာန်အစစ်ကိုဖြတ်ယူ၍ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးအား ဆက်သသည်။ သိကြားမင်းသည် အလောင်းစည်သူမင်းကြီးထံမှ သရက္ခာန်သားဖြင့်သရက္ခာန်ရုပ်တုတော်မြတ်ငါးဆူ၊ မြတ်ပေါင်းမဉ္ဇူတစ်ဆူ၊ ရှင်ဖြူ ရှင်လှနှစ်ဆူ၊ ပေါင်း ရှစ်ဆူထုလုပ်ပြီး အလောင်းစည်သူမင်းကြီးအား ဆက်သလေသည်။ သက္ကရာဇ်(၄၈၂)တွင် အလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ နှင့် စတုတ္ထသရက္ခာန် ရုပ်တုတော်လေးဆူကို
သန်းထောင်အရပ် ဖောင်တော်ပေါက်တောင်ခြေရင်း၌ ဌာပနာတိုက်တည်ဆောက်ပြီးလိုဏ်ဂူသွင်းထားသည်။ မြတ်ပေါင်းမဉ္ဇူဘုရား ရုပ်တုတော်ကို မဟာဂါမရွာကျောင်းဆရာတော် အရိယဓဇ ဓမ္မရာသီ ထံအပ်နှံခဲ့သည်။သက္ကရာဇ်(၇၂၁)တွင် သန်းထောင်အရပ် လိုဏ်ဂူသွင်းဌာပနာထားသည့် ရုပ်တုတော်မြတ်လေးဆူသည် ရောင်ခြည်တော်များ
ကွန့်မြူးခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရှိ၍တူးဖေါ်ကာ ညောင်ရွှေမြို့ ရွှေအင်းတိမ်ဘုရားကြီးသို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ မဟာဂါမရွာကျောင်း၌ သီတင်းသုံးတော်မူသော မြတ်ပေါင်းမဉ္ဇူဘုရားရုပ်တုတော် နှင့်အတူ ကိန်းဝပ်တော်မူသည်။ သက္ကရာဇ်(၁၂၅၂)မှစ၍ ရုပ်တုတော်ငါးဆူကို နန်းဟူးရွာ၌ ထာဝရ ကျောင်းတော်ကြီးတည်ဆောက်ပြီး ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြမှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။’
မွန်လေးတို့ လည်းရွှေသင်္ကန်းဝယ်ပြီးအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုရွှေသင်္ကန်းကပ်ခိုင်းပြီးဆွမ်းပွဲနဲ့ပန်းတို့ ကပ်လို့ ရတယ်ပြောလို့ ကုသိုလ်ရအောင်ကပ်လှူခဲ့ပါတယ်။ဖောင်တော်ဦးစေတီမှာ ဗုဒ္ဓဆင်းတု ၅ ဆူ စံပါယ်တော်မူပေမယ့်
သဒ္ဓါတရားထက်သန်မှုကြောင့် ရွှေသင်္ကန်းတွေအကပ်များပြီးယခုအခါဆင်းတုတော်မှာမူလသွင်ပြင်ပင်မရှိတော့တာတွေ့ မြင်ရပါတယ်။
ဘုရားအပြင်ကိုထွက်လာကြတော့ တို့ ဖူးကြော်နံ့ လေးကလည်းသင်းလို့ သွားရည်ကျလာကြတာနဲ့အားလုံးသူနာရီဝက်လောက်
ထိုင်စားဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းတို့ ဖူးဆိုတာလေ..အရမ်းကောင်းမှန်းအင်းထဲရောက်မှသိခဲ့ရတာ..ရန်ကုန် မှာစားတဲ့တို့ ဖူးဆိုတာ..မာမှန်း ရှမ်းတို့ ဖူးစားမှသိတော့တယ်။ရေရေလည်လည် ဂွတ်တာ??..အပြန်တောင်ရန်ကုန်ရောက်ရင်စားချင်လွန်းလွန်း.ခေါင်တိုင်၅ရက်၁ဈေးမှာဝယ်သွားခဲ့သေးတာ။အင်းထဲရောက်ရင်စားဖြစ်အောင်စားခဲ့နော်။
အင်းတိန်ဘက်အသွားမှာအင်းထဲမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးယက်ကန်းရုံနဲ့ငွေထည် လုပ်ငန်းများရှိရာကိုလည်ပတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လမ်းမှာ ရေပေါ်ဟိုတယ်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ ရေပေါ်စိုက်ခင်းတွေ အိမ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ ငွေထည်လုပ်တဲ့နေရာတွေကို ဝင်ပြီးလေ့လာလို့ရပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဖောင်တော်ဦးဘုရားဖူးပြီးရင်မဖူးမဖြစ်အလိုတော်ပေါက်ဘုရားကို လည်းဝင်ရောက်ဖူးမြေ်ာခဲ့ပါတယ်။??
ကြောင်လေးတွေ(၇)ကောင်လောက်ပဲတွေ့ ခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကအ၀ိုင်းကွင်းကိုထောင်ပေးပြီးကြောင်တွေတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ခုန်ကြတာတွေ့ ခဲ့ ပါတယ်။အရင်တုန်းကလောက်မခုန်ကြတော့ဘူးလို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
အင်းတိန် က အင်းလေးက နေနာရီဝက်လောက်သာသာမောင်းရ.တယ်။ လှေဆိပ်ကနေဘုရားတွေဆီကို ရောက်ဖို့ ရွာလမ်းဝါးတောအုပ်လေးကို(၇)မိနစ်လောက်လျှောက်ရပါတယ်။ စောင်းတန်း က ရှည်တယ် ၊ ဘုရား
ရင်ပြင်ရောက်ဖို. တော်တော်သွားရပါသေးတယ်။စောင်းတန်းတစ်လျှောက် ဈေးသည်တွေ ရှိတော့ ပျင်းစရာတော.
ခေတ်အဆက်ဆက်မင်းမြတ် တွေပြုပြင်ကြည်ညိုစေချင်တဲ့စိတ်အစဉ်ကြောင့် အရံစေတီပေါင်း (၁၀၅၄)ဆူလှူ ဒါန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားစေတီတော်တွေကိုစီရရီတည်ထားပုံကလည်းကြည်ညိုစရာအတိပါ။တချို့စေတီများမှာပျက်စီး နေကြပါပြီ။အဲလိုမပြုမပြင်ဘဲသဘာဝအတိုင်းထားတာ ကိုကနိုင်ငံခြားသားတွေ
နောက်တစ်နေ့ မှာပင်းတယကိုသွားဖို့ ဟိုတယ်ကနေကားငှားပြီးသွားခဲ့ကြပါ တယ်။ ပင်းတယသွားမယ့်လမ်းမှာခေါင်တိုင်ရွာကိုခဏ၀င်ခဲ့ကြပါတယ်။
အင်းလေးရဲ့ ၅ရက်၁ဈေးကအဲ့နေ့ ခေါင်တိုင်မှာမွန်လေးတို့ ပင်းတယသွားမယ့်နေ့ ဖြစ်နေလို့ ပါပဲ။ aဈးထဲမှာပါးအို့ နီနီရှမ်းမလေးများ ခေါင်းပေါင်းလေးများ ပေါင်းလို့ ထားပြီးချစ်စဖွယ်ရှမ်းသံဝဲ၀ဲနဲ
့ဈေးသည်ကိုခေါ်နေကြတာတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းရိုးရာအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းတို့ ဖူးကိုလည်းရန်ကုန်မှာစားဖို့ ဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။??
ခေါင်တိုင်ရွာကရေပူစမ်း (Natural Hot Spring Inle) ကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ရေပူစမ်းပါ။
တစ်ယောက်ကို၁ထောင်ဆိုလားပဲ။ အချိန်လည်းမရှိတော့လို့ အပြင်ဝခြံထဲမှာပဲဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ရေပူစမ်းရဲ့ အရှေ့ ဘက်မှာလည်း မြေကြီးထဲကရေကအလိုအလျောက်ပူနေတဲ့၊မပြုမပြင်ဘဲထားတဲ့ရေပူ ကန်ကိုလည်းတွေ့ ခဲ့ပါသေးတယ်။
မွန်လေးတို့ ပင်းတယကိုသွားတဲ့အခါအဖွဲ့ က လူ၈ယောက်ပါပါတယ်။ကား သမားနဲ့ ဆိုတော့ လူ၉ယောက်ပေါ့နော်။ကြားဖူးတာတော့လူ၉ယောက်နဲ့ ဆိုခရီး သွားရင်မကောင်းတတ်ဘူးတဲ့။အဲဒါကြောင့်ပဲလားမသိပါဘူး။လမ်းမှာကားက ပျက်ပါလေရော။နောက်တော့အဖွဲ့ ထဲမှာပါလာတဲ့အမတစ်ယောက်ကသတိ ထားမိလေတော့ကျောက်ခဲကို မောင်ကျောက်ခဲဆိုပြီးကားပေါ်ကိုတင်ခေါ်သွား တော့မှပဲကားကပြန်ကောင်းသွားတာမှညောင်ရွှေကိုပြန်ရောက်တဲ့အထိပါပဲ။အကယ်လို့ ခရီးသွားတဲ့အခါကားထဲမှာလူ၉ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ ရှိရင်၁၀ယောက်ပြည့်သွားအောင်ကျောက်ခဲလေးတစ်လုံးကိုဆောင်သွားပါလို့ ။
ပင်းတယလိုဏ်ဂူရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဂူအတွင်းမှာ ဘုရားဆင်းတုတော်ပေါင်းများစွာတည်ထားကိုးကွယ်ထားတာရယ်နဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း ရွှေသင်္ကန်းကပ်လို့ရတာရယ်ပါပဲ။ အပေါ်ကို ဓါတ်လှေကားနဲ့ တက်လို့ရပါတယ်။မွန်လေးတို့ ကတော့ လှေကားနဲ့ လမ်းလျှောက်ပြီးပဲတက်ခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလှက ….လှလွန်းလို့ဘာနဲ့ တောင်နှိုင်း ယှဉ်ပြရမယ်မှန်းမသိပါ။ ဂူအတွင်းရောက်သွားရင်ကိုပဲရင်ထဲမှာအေးချမ်းပြီး ဘုရားဆင်းတုတော်ပေါင်းများစွာကို ဖူးမျှော်ရမှာပါ။ အ၀င်ဝနားက ပင့်ကူကြီးနဲ့ မင်းသားရုပ်လေးကတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။အပြန်လက်ဆောင်တွေကတော့ ကားရပ်တဲ့နေရာက ဆိုင်တန်းလေးတွေမှာရောင်းတယ် ။ ပင်းတယကရှမ်းခေါက်ဆွဲကလည်းဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိ၊အရသာရှိပါဘိ။??
နာမည်ကျော် ပုန်းတလုတ်ရေကန်ကတော့ ပင်းတယနားမှာပဲ ။နီးနီးလေးရယ်။ ပုန်းတလုတ်ရေကန်မှာ ခဏဆင်းပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကြတာ selfie တို့ groupfieတို့ ဆွဲတာအရမ်းလှတယ်သိလား။နောက်selfie တို့ ဆွဲလို့ ကောင်းတဲ့နေရာလေးကတော့ပင်စည်တောင့်တောင့်တင်းတင်းတွေရှိတဲ့၊အရိပ်ကောင်းကောင်း
ရတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပင်းတယအ၀င်ဝနေရာမှာလို့ ပဲပြောရမလားနော်။
#ကုံလုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ??
ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားကြီး ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ဖူးမျှော်ချင်ရင်တော့ ပင်းတယကအပြန် တစ်ခါတည်းသွားလို့ရပါတယ်။ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားဟာ သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းက ရဟန္တာတစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တကယ်လည်း ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အချိန်မှာ ရုပ်ကလာပ်တော်ဟာ မပျက်စီးမယိုယွင်းဘဲ အကောင်းပကတိအတိုင်းကျန်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခြေသည်းလက်သည်းများကလည်း ဆက်လက် ရှည်ထွက်နေပါတယ်။ဆံပင်တွေကလည်း ပေါက်နေ
တုန်းပါပဲ။နှစ်ပေါင်းများစွာ ထားထားတာတောင် ဒီအတိုင်းရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဆရာတော်ရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ပူဇော်ထားတဲ့ ကျောင်ဆောင်ကြီးဟာလည်း သိပ်ကို ခမ်းနားလှပါတယ်။ သူများပြောပြဖူးတာကြားဖူးလို့ ပြန်လည်တင်ပြပေးတာပါ။မွန်လေးတို့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
အင်းလေးကိုသွားလည်မယ်ဆိုရင်တော့တည်းခိုဖို့ နေရာ၂နေရာကိုအရင်စဉ်း စားရပါမယ်။ကိုယ်ကညဘက်ဆိုလည်းအပြင်တွေလျှောက်သွားတတ်တဲ့သူလား။
ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဟိုတယ်ဝန်းကျင်မှာပဲနေချင်တဲ့သူလားဆိုပြီးညောင်ရွှေမြို့ ထဲမှာတည်းလို့ ရသလို အင်းထဲရေပေါ်မှာလည်းတည်းလို့ရပါတယ်။အင်းလေးကို
ရောက်တော့မှတော့အင်းထဲကဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာတည်းစေချင်ပါတယ်။ဈေးသိပ်မကြီးတဲ့ရေပေါ်ဟိုတယ်Paradise တို့ Paramount Inle hotel တို့ လည်း
နဲ့ ညောင်ရွှေကိုအပြီးပြန်ကြလို့ ပဲဖြစ်ပါ တယ်။
အင်းရိုးရာအစားအစာဖြစ်တဲ့ငါးဒုက္ခ၊စွန်တန်ဟင်းချို၊၊ မုန်ညင်းချက်ဟင်း၊ထမင်းသုပ်(ပဲပုပ်မွှေးမွှေးလေးနဲ့ )၊ဟင်းထုပ်၊အင်းလေးငါးကြော်၊ ငါးထမင်းနယ်တို့ ပါ။
ဒါတွေကတော့မွန်လေးလက်လှမ်းမီသလောက်စားခဲ့တာလေးတွေပေါ့နော်။ကျန် ခဲ့တာများရှိရင်လည်းမန့် ခဲ့ကြပါဦး။??
ရှမ်းရိုးရာချည်ထည်၊လုံချည်လေးတွေကိုတော့အလိုတော်ပေါက်ဘုရားဝန်းထဲမှာဝယ်လို့ ရပါတယ်။(မွန်လေးအဲ့က၀ယ်ခဲ့လို?့ )ဘုရားတွေရဲ့ စောင်းတန်းမှာလည်း
ရိုးရာအရုပ်ကလေးတွေဝယ်လု့ိရပါတယ်။ယက္ကန်းစက်ရုံတွေမှာလည်း ကြာထည်၊ချည်ထည်လေးတွေပုဝါလေးတွေလည်းဝယ်လို့ ရပါတယ်။အစစ်ကလေးတွေပါ။
ပင်းတယရွှေဥမင်လှိုဏ်ဂူ နားက ဈေးတန်းမှာ ဒေသထွက်ကုန် တော်တော်လေးစုံတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ဖက်၊ ဂျူးမြစ်ခြောက်ကြော် စားလို့ကောင်းတယ်။ ညနေ ၃နာရီ မတိုင်ခင်ထိတော့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဗန်းလေးတွေနဲ့ လာရောင်းတဲ့ သစ်သီးသည်တွေတော့ ရှိတယ်။ ထောပတ်သီး အရသာ တော်တော်စိမ့်တယ်။ ရွာငံကနေ လိမ္မော်သီး မဖြစ်မနေ ဝယ်သင့်တယ်။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့အင်းလေးခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့လို့ နှစ်တိုင်းလည်းဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော်ကရှိနေမှာမို့ တစ်ခေါက်ခေါက်တော့ရောက်ဖြစ်အောင်သွားကြပါလို့ ။
Shar Thet Man has written 381 post in this Website..
ခေါတုန်းက ခေါ်ပြီး ပြကျတော့ မေညက်ကျောက်ခဲကို သူ့နေရာပြန်ချခဲ့ရဲ့လား
သျှားခို စားခြင်ဒယ်
နောက်လည်းခရီးစဉ်လေးတွေရေးပေးဦးမယ်နော်…သင့်အေးရိပ်ကတော့ ဟိုတခါကိစ္စဖြစ်ပြီးကတည်းက တခါမှမမန့် တော့ဘူး ဟီး